काँग्रेसले सदन भित्र र बाहिर दुबैको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैनः गुरुराज घिमिरे – Maitri News
काँग्रेसले सदन भित्र र बाहिर दुबैको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैनः गुरुराज घिमिरे
Mohan Bastola April 17, 2019
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे अहिले पनि पार्टीका नेताहरुका सत्ताको ह्याङओभर हट्न नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ । अगाडिपछाडि सलाम गर्ने गार्डहरु पनि छन् । अघिपछि दुगुर्ने वत्तीवाला गाडी पनि छन् । कार्यक्रममा जादाँ दुइचार सय मानिस भेला पनि भैरहेकै छन् । दैनिक सय–दुई सय मानिस पनि भेट्न आएकै छन् । कहिलेकाँहि प्रधानमन्त्रीसँग भेट पनि भएकै छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सदनमा जाँदा विपक्षी दलले बस्ने आशन पनि प्राप्त भएकै छ । पार्टीका पदहरु पनि छन् । यसरी हेर्दा अहिले हाम्रो पार्टी निन्द्रामा त नभनौँ ठूलो तन्द्रामा छ ।’ घिमिरेसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
काँग्रेसले संसद भित्र र बाहिर प्रतिपक्षीको भूमिका बलियो बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने आरोप छ । यसलाई चाँहि कसरी लिनुहुन्छ ?
मैले बेलाबेलामा आफ्ना धारणा राख्दा पनि यो काँग्रेसको पोजिशनप्रति खुशी पनि व्यक्त गर्ने गरेको छु । हामीलाई नियतीले वा परिस्थितिले ठूलो अवसर दिएको छ । हामीलाई आन्तरिक रुपमा सुध्रिन र जनतासँगको सम्वन्धलाई बलियो बनाउन अवसर समेत दिएको छ । त्यति मात्र होइन हाम्रो नेतृत्वमा भएका उपलब्धीहरुलाई समीक्षा गर्न र जनतालाई बताउन पनि एउटा ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसरले हामीलाई जनतासँग समधुर सम्वन्ध स्थापित गर्न पनि अवसर दिएको छ । हामीलाई जनताका बीचमा जानका लागि यो भन्दा ठूला अवसर कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन । हामी अहिले सत्ताको केन्द्र भन्दा बाहिर छौँ । हामीलाई अहिले सत्ताको केन्द्रले अलमल्याउने अवस्था छैन । त्यसैले जनताको बीचमा जानका लागि ठूलो राजमार्ग बनेको छ । हामी विगतमा लामो सयम सत्तामा रहँदा सिंहदरबार भित्रै अलमलियौँ । जनतासँगको सम्वन्ध हाम्रो कमजोर भयो । म फेरि पनि भन्छु– अहिले हामीलाई इतिहासले जनतासँग जान ठूलो अवसर दिएको छ । यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । यो बेला हामीले पार्टीका अवयवहरुलाई सक्रिय बनाउने, व्यवस्थित बनाउने र जनताका बीचमा जाने गर्न सकेनौँ भने भविश्यमा पनि हामी कमजोर बन्ने छौँ ।
काँग्रेसले आफूलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला त ?
हो, अहिले हाम्रो भूमिका जनअपेक्षा मुताविक अघि बढ्न सकेको छैन । मैले अघि पनि भने सदन भित्र र बाहिर दुबैको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले गरेको गतिविधिलाई एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर वा सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि जनाएर मात्रै पुग्दैन । अहिले कांग्रेस प्रतिक्रियात्ममक मात्रै भएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर विज्ञप्ति जारी गर्दैमा जनताप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारले गरेका कामलाई केस्रा–केस्रा केलाएर जनताको अहितमा देखिएका कामका बारेमा जमेर सदन भित्र र बाहिर मुकाविला गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता वा दायित्व हो । तर, हाम्रो पार्टी सदनमा सत्तारुढ दलले ल्याएको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्छ । ऐनहरु सर्वसहमतिबाट पारित गर्छ । यसलाई संस्कार पनि भनिएला । तर, यो विश्वमा कहिँ पनि हुँदैन । सत्तापक्षले एक अक्षर पनि कमीकमजोरी नभएको नीति र कार्यक्रम ल्याउँदैन । त्यहाँ प्रतिपक्षीले खवरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो भूमिकामा काँग्रेस कमजोर देखियो । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई काँग्रेसले ६ महिनासम्म चुपचाप बसेर समर्थन गरेको विगत छ । यो प्रतिपक्षीको भूमिका होइन, भन्नका लागि संस्कार भनिएला तर प्रतिपक्षी कमजोर भएको सन्देश हो, त्यो । राष्ट्रको हितमा भएका सकारात्मक कामको मुक्तकण्ठले खुलेर समर्थन गर्ने र राष्ट्रको अहितमा भएका कामको खुलेर विरोध गर्नुपर्ने हो । तर, अँह त्यो देखिएन । हाम्रै पार्टीले यो सरकारले उत्तिणाङ्क प्राप्त गर्यो भनेर भनेको छ । त्यो भनेको त सरकार सफल भयो भनेको हो नि ? सफल भयो भनेपछि विरोध किन गर्ने ? त्यसैले नेपाली काँग्रेस अहिले विपक्षीको भूमिकामा सदन भित्र र बाहिर एकदमै कमजोर देखिएको छ ।
काँग्रेस कमजोर नै भएको हो त, त्यसो भए ?
विल्कुल, म निसंकोच भन्न चाहन्छु । अहिले पनि हाम्रो पार्टीका नेताहरुका सत्ताको ह्याङओभर हट्न सकेको छैन । अगाडिपछाडि सलाम गर्ने गार्डहरु पनि छन् । अघिपछि दुगुर्ने वत्तीवाला गाडी पनि छन् । कार्यक्रममा जादाँ दुइचार सय मानिस भेला पनि भैरहेकै छन् । दैनिक सय–दुई सय मानिस पनि भेट्न आएकै छन् । कहिलेकाँहि प्रधानमन्त्रीसँग भेट पनि भएकै छ । सदनमा जाँदा विपक्षी दलले बस्ने आशन पनि प्राप्त भएकै छ । पार्टीका पदहरु पनि छन् । यसरी हेर्दा अहिले हाम्रो पार्टी निन्द्रामा त नभनौँ ठूलो तन्द्रामा छ ।
स्थानीय तहमा हाम्रो बहुमत छैन । सत्तामा हामी छैनौँ । प्रदेश पनि हाम्रो पक्षमा छैन भन्ने कुराको हेक्का हाम्रो पार्टीले गर्न सकेको छैन । जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल यसरी कमजोर भएको छ भन्ने समेत हेक्का हाम्रो पार्टीलाई भएको छैन । आकारमा अनपेक्षित रुपमा खुम्चिदाँ नि सत्तको ह््याङओभरबाट मुक्त नहुनु दुःखको कुरा हो । काँग्रेसले धरातलीय यथार्थलाई बुझ्नुपर्छ । यो सबैलाई हेक्का राखेर काँग्रेसले समीक्षा होइन गम्भीर आत्मासमीक्ष गर्नुपर्छ । कमजोरी कहाँनेर भयो, गल्ती केकारण भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । जनताको चित्त कहानेर दुख्यो, जनता किन असन्तुष्ट भए, जनताले किन हामीलाई मत दिएन भनेर पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । हामी समानुपातिकमा राम्रो छौँ भनेर त्यो देखाएर हुँदैन । हामीले प्रत्यक्षमा त हारेका हौँ नि ? हो कम्युनिष्टहरुको गठबन्धनले हामीले हार्यौँ त्यो सँगै हाम्रो आन्तरिक कमजोरीले पनि त हारेका हौँ नि ? यो पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले आन्तरिक कमजोरीले पनि हारेका हौँ भन्नै नसक्ने हुँदैन । सभापति, वरिष्ठ नेता, पार्टीका नेताहरुले पनि त कमजोरी स्वीकार गर्नु पर्यो नि । कार्यकर्तालाई मूल्याङन गर्न सकेनौँ, टिकट वितरणमा कमजोरी गर्यौँ भन्ने कुरा पनि त हामीले ख्याल गर्नु परो नि । एक नेताले अर्को नेतालाई गाली गरेर होइन कमजोरीको समीक्षा गरेर मात्र हामी भविश्यमा काँग्रेसलाई उठाएर हिडाउन सक्छौँ । समाजमा दुई प्रकारका मान्छे हुन्छन् । एउटा चिठ्ठा पर्ला र धनी बनौँल भन्ने र अर्को पौरख गरेर धनी हुँने । पौरख गर्नेले गरिरहन्छ, ऊ धनी हुन्छ । अर्को चिठ्ठा कुरेर बस्छ । कहिल्यै चिठ्ठा पर्दैन । ऊ धनी पनि हुँदैन । हो, अहिले कम्युनिष्ट पार्टी अलोकप्रिय बन्ला, कमजोर होला अनि हामी ठूलो हुन्छौँ भनेर पर्खिएर बस्ने हो भने कहिल्यै हुँदैन । यो मनोदशालाई काँग्रेसले हतटाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
हो, सरकारल जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकार अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको दम्भले उन्मादले सरकार अलमलिएको छ । त्यो भन्दा बढी विपक्षी अलमलिएको छ । यसमा सुधारको खाँचो छ । हामीले पार्टी भित्रको एकतालाई सुदृढ बनाएर अघि नबढ्ने हो भने समस्या छ । कुनकुन नेताबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो त्यो सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । पार्टीको अहिलेको आवश्यकता भनेको नै पार्टी भित्रको एकता हो ।
कोइराला परिवार अहिले आफ्नो साख फर्काउन लागेको भन्ने चर्चा छ, नि ?
कोइराला परिवार लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर हुन् । उनीहरु नेपाली काँग्रेसका संस्थापक हुन् । वीपी नहुनु भएको भए हामी परिकल्पना गरौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहास कस्तो लेखिन्थ्यो होला । अहिले उहाँहरुले जुन खालको छलफल गर्नुभएको भन्ने चर्चा छ । त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्ने कारण छैन । उहाँहरु मध्ये कसैले नेतृत्व लिने कुरा स्वीकार भए लिनुहुन्छ । उहाँहरु सबै मिलेर कसैलाई समर्थन पनि गर्न सक्नुहुन्छ । पार्टीमा कोइरालाहरुको आवश्यकता होकि होइन ? त्यो विषयमा पनि छलफल भैरहको छ । यसलाई अन्यथा मान्नु पर्ने कारण छैन ।
Previous Previous post: भेरी–बबई डाइभर्सन सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु ‘
Next Next post: राजदूत डा. शाक्यको पहलले मृतसागरमा सगरमाथाबारे राखिएको गलत सूचना हटाइयो